Toos: Natiijada kama dambeysta ah ee doorashada oo u muuqata mid mindi caraddeed saaran | XORRIYA NEWS
Home Caalamka Toos: Natiijada kama dambeysta ah ee doorashada oo u muuqata mid mindi...
Toos: Natiijada kama dambeysta ah ee doorashada oo u muuqata mid mindi caraddeed saaran
Natiijada kama dambeysta ah ee doorashada ayaa u muuqata mid mindi caraddeed saaran, Iyadoo ay weli socdaan tirinta codadka doorashadii Mareykanka.
Qofkii hor gaadha 270 ayeyna raaceysaa guusha kama dambeysta ah ee uu xaqa ugu yeelanayo xafiiska Aqalka Cad ee looga arrimo waddanka ugu awoodda badan caalamka.
Malaayiin cod ayaan wali la tirinin, mana jiro musharrax sheegan gara inay guusha xaggiisa raacday ilaa imika.
Shacabka Mareykanka ayaa lagu soo warramayaa in tiradii ugu badneyd ay doorashada usoo baxeen muddo hal qarni ah.
Iyadoo hadda Mareykanka ay ka jirto xiisad, haddana natiijada kama dambeysta ah ayaa laga yaabaa inay qaadato maalmo.
Waxaa la saadaalinayaa in Jeo Biden uu ku guuleysanayo Doorashada Madaxweynaha Mareykanka, kadib markii uu ku guuleystay Gobolka Wisconsin, haddana uu kaabiga u saaran yahay Gobolka muhiimka ahee Michigan oo ahaa labada gobol oo sida weyn isha loogu hayey oo muhiim u ahaa guusha doorashada.
Jeo Biden ayaa la filayaa inuu xilka Madaxweynaha ku guuleysto isagoo aan u baahan Gobolka Pennyselvenia oo ay weli harsan yihiin tirinta codad ka badan Hal milyan oo lagu dhiibtay Boostada, taasoo ay dacwad ka fureen madaxweyne Trump iyo xisbigiisa, ayna doonayaan in la joojiyo tirinta codadkaasi oo u badan kuwa taageersan Jeo Biden.
Shir jaraa’id oo uu goor dhow qabtay Musharaxa Xisbiga Dimoqraadiga ayuu ku sheegay inay caddahay guusha uu ka gaaray doorashada, laakiin uu sugayo inta laga dhammeynayo tirinta codadka doorashada ee la dhiibtay.
Mr Trump ayaa waxba kama jiraan kasoo qaaday saadaalintii la sameeyay doorashada ka hor, isagoo aad uga taageero badnaa sidii loo maleynayay, laakiin Mr Biden ayaa tiro aan badneyn ku hoggaaminaya ilaa hadda.
Saraakiisha Ololaha Biden waxay sheegeen inay natiijada guusha filayaan galinka dambe ee maanta oo Khamiis ah, xilliga Mareykanka.
Hase yeeshee Trump oo muujiyay inaan la dhayalsan karin ayaa qaatay qaar ka mid ah gobollada ugu waaweyn ee doorashada, oo ay ka mid yihiin Texas iyo Florida, kuwaasoo Biden uu ku riyoonayay inay caro ay Trump u qabaan awgeed isaga u garab istaagi doonaan.
HALKAAN KAAL SOCO SAACAD WALBA WIIXI SOO KORDHA………